Muxu kusoo dhamaaday Ciyaartii Xulka Qaranka Soomaaliya iyo Zimbabwe ? %
Muxu kusoo dhamaaday Ciyaartii Xulka Qaranka Soomaaliya iyo Zimbabwe ?
By Laacib News	 On Sep 10, 2019
Xulka Dalkeena Soomaaliya ayaa guul darro kala kulmay xulka Zimbabwe kulan ka tirsanaa is reeb-reebka Hordhaca ah ee koobka adduunka 2022 Kana dhacay garoonka dalka Zimbabwe .
Ciyaartooyda qaranka Soomaaliya ayaa looga badiyay 3/1 inkasta oo ay si fiican u difaacdeen qaybtii hore ee ciyaarta laakiin xulka Ocean Stars ayaa bur-buray daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ay dheeleen galabta.
Qaladaadkii galabta dhacay ee guuldaradii soo gaadhay xulka Qarankeena Soomaaliya waxaa ka mid ah:
1. Bilowga ciyaarta oo ay difaacasho ay ku bilowdeen
Ciyaartooyda qaranka Somalia ayaa ku bilowday difaacasho isla markii garsooruhu yeeriyay siidhiga ciyarta iyaga oo inta badan ku mashquulsanaa sidii ay u difaacan lahaayeen goolkooda taasoo keentay in labo gool laga dhaliyo.
Ciladaas ayaan oran karnaa in ay si fiican u shaqaysay marka loo eego in ay si fiican u ilaashadeen shabaqooda hadana waxa ay ahayd in ay dhanka weerarka ka shaqeeyaan weeraro rogaal celis ahna qaadaan inta ciyaarta socoto.
2.Dhanka Xasiloonida Ciyaarta kubadda cagta Xulka Somalia Oo Aan Daganeyn:
Wiilasha qaranka Soomaaliya ayaan ciyaarin kubad dagan iyaga oo kubad walba oo ay helaan iska fogaynayay oo aan inta badan ciyaarin baas ay ku kexeeyaan kubada kuna geeyaan goolka xulka Zimbabwe ay la ciyaarayeen.
Arrinta kubadda Marka ay xiddigaha xulka Soomaaliya haystaan waliba baas ciyaaraan waxa ay ahaayeen qaar halis ku ah xulka ka soo hor jeeda taas oo waliba qal-qilaneysay xulka Zimbabwe marka ay kubadda helaan.
3. Dhanka Weerarka Oo Aan Shaqadooda Ka Soo Dhaqaaqin:
Ciyaartooyda Afka Weerarka xulka Soomaaliya ayaan ka soo bixin shaqadoodii iyaga oo aan halis galin xulka Zimbabe kuwaas oo daafacoodu si raaxo leh isaga ciyaaryay lana kulmin cadaadis.
Weerarka xulka Somalia ee ciyaartan iyo midkii ciyaartii hore waxa u dhexeeyay farqi aad u weyn maadama ayna wax cadaadis ah saarin daafaca xulka ka soo hor jeeda taas oo keentay in ilaa daafaca Zimbabwe weerarka soo galaan goosha xulka Soomaaliya agagaarkeeda.
4.Badalka Ciyaarooyda La Sameeyay:
Xilli uu xulka Qaranka Somalia si fiican u difaacanayo sidoo kale xiddiguhu si fiican iskula qabsadeen ayuu tababaraha xulka soomaaliya sameeyay is badal taas oo qal-qalisay qorshihii xulka dalkeena kusoo xisaabtameen.
Ugu dambeyntii is badalka lagu sameeyay ayaan waxba ka badalin ciyaarta iyaga oo kaliya ku soo kordhiyay qal-qal iyo isku dheeli tirnaan boosaska ciyaartooyda ah.
Shaxda rasmiga ah ee xulka qaranka Soomaaliya uu ku soo geli doono kulanka galabta ee Zimbabwe
Macalinka Man United Solskjaer Oo Ka Wal-Walsan Taam Ahaanshaha 5 Xiddig